21:18 Posted by ကျောပိုးအိတ်
သီတင်းကျွတ်ပြီတဲ့။ မိုးလေကင်းလွတ်ပြီလို့ ထင်ရပေမယ့် ခုထိမလွတ်သေးပါဘူး။ မုန်တိုင်းတွေကလဲ ပေါ်ကောင်းတုန်းပါဘဲ။ မိုးကလဲရွာကောင်းတုန်း။ ရာသီဥတု ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်နေပါစေ .. ၀ါအကျွတ်ကို အားကြိုးမာန်တတ် လက်ချိုးပြီး ရေတွက်စောင့် နေသူများအတွက်တော့ မင်္ဂလာရှိတဲ့အခါသမယပါဘဲ။
ကျွန်မအတွက်တော့ သီတင်းကျွတ်တာလဲ ကျွန်မနဲ့ မဆိုင်သလို။း( ။ လာလိုက်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ။ ဆောင်ဆောင်နိုင်လွန်း တယ်။ (တကယ်တော့ မနာလိုပြီး အားကျတဲ့လေသံနဲ့ )
ဖိတ်တဲ့လူကလဲ ကြိုးနဲ့ တစ်ခါထဲချည်သွားတယ်။ တို့ မင်္ဂလာဆောင်မလာ ရင် နင့်မင်္ဂလာဆောင်လဲမလာဘူးတဲ့။ ဟော သွားပြန်တော့လဲ အနှောင့်အသွားက မလွတ်ချင်။ ဘယ်တော့လဲ။ ငှက်ပျောပင်စိုက်ထားပြီလား။ဘာညာနဲ့ ။ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တွေ့ တဲ့သူတိုင်းကလဲ ဘယ်တော့လဲ။သူများတွေကျွတ်ကုန်ပြီနော်။အားမကျဘူးလား။ရွှေလက်ဘယ်တော့ တွဲမလဲတဲ့။ စိတ်ရှိလက်ရှိသာ အော်လိုက်ရရင်တော့။
ဟော ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေ တွေ့ လို့ချီလိုက်မိရင်လဲ ကိုယ်တိုင်မွေးပါလားတဲ့။ ဘာလုပ်လုပ် အနှောင့်အသွားကမလွတ်ချင်ဘူး။
ပြီးတော့ လာလိုက်တဲ့ ဘုံကထိန်။ ဟောတစ်စောင် ဟောတစ်စောင်နဲ့ ။ လာသမျှအလှူခံကိုလဲ နှမြောတွန့်တို ခြင်းမရှိ။ လှူခဲ့တာဘဲ။ အလှူခံဖြတ်ပိုင်းမှာ နာမည်ရေးတော့ ထုံးစံအတိုင်း တိုင်ကပတ်ပြန်ရော။ ကျွန်မနာမည် ဘဲပါပြီး နောက်တစ်ယောက်နာမည်မပါလို့တဲ့။ နောက်တော့ အပြောဆိုလွတ်အောင် ဖေဖေနဲ့ မေမေနာမည် ထည့်တော့မှ နည်းနည်း အနေအစားချောင်တော့တယ်။
(ရေးပြီးသား ပို့ စ်အဟောင်းလေးပါ) မဖတ်ရသေးရင်တော့ အသစ်ပေါ့ကွယ် .. ဟီးးးးးး
ငပိထမင်းကြော် နဲ့ဝက်သားကင်
17:41 Posted by ကျောပိုးအိတ်
ငပိထမင်းကြော်ပါရှင့် .. ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ငပိပါတယ် .. ၀က်သား .. ပုဇွန်ခြောက်ကြော် .. သရက်သီးစိမ်း.. ငရုတ်သီးကြော် .. ကြက်ဥကြော် ..သခွားသီးနဲ့ကြက်သွန်နီရယ် နံနံပင်ရယ် :D:D
ငပိထမင်းကြော်နဲ့စားဘို့ အအီပြေ အချဉ်
၀က်သားကင်နဲ့ တို့ စားမယ် :D
နေနေ - မညီမျှခြင်း
ကျွန်မ အကြီးကြီး ကြိုက်သော သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ ။
16:28 Posted by ကျောပိုးအိတ်
စာရေးဘို့ ရာ တော်တော်လေး ပျင်းနေတယ် .. (တဂယ်ကြီးက ပျင်းတယ်ဆိုတာထက် တစ်ယောက်သောသူကို အကြီးကြီး သတိရပြီး လွမ်းနေလို့မရေးဖြစ်တာ။) ဘလော့လေးလဲ ပြစ်ထားတာ စိတ်ဆိုးနေရော့မယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် ခုနည်းနည်း ကော်ပီဆွဲလိုက်တယ် .. ;P
ငါအိုသွားသောအခါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ချစ်ဆုံးကြီးအတွက် ပြင်ပြီး ပြန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါခဲ့သော် သည်းခံပေးပါရှင့် .. ;D
နဲ့ ထမင်းဟင်းတွေအင်္ကျီပေါ်ဖိတ်စင်သွားတဲ့အခါ အင်္ကျီ၊လုံချည် ဖိုသီဖတ်သီဖြစ်နေတဲ့အခါ ငါ့ကိုမရွံပါနဲ့ .. ငါဟာ ငါ့ကိုယ် ငါတောင် ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ.. နင့်အတွက်ကိုသာ တွေးနေမိလို့ ပါ ။
အပ်ကြောင်းထပ်မကပြောဘူးတဲ့စကားတွေပြန်ပြောမိတဲ့အခါ စကားမဖြတ်ပဲ ကျေးဇူးပြုပြီးနားထောင်ပေးပါ။ နင်ပျင်းနေမှာစိုးလို့ငါစကားတွေ ကြံဖန်ပြောပေးပြီး နင့်ကို အဖော်လုပ်ပေးနေလို့ ပါ ။
ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်တဲ့အခါ မြန်မြန်ရေချိုးဘို့ငါအော်ခဲ့တာ နင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ရေချိုးကြာပြီး နင်နေမကောင်းဖြစ်မှာ စိုးရိမ်လွန်းလို့အော်မိတာပါ။
ခေတ်သစ်နည်းပညာသစ်တွေကိုမသိနားမလည်ခဲ့ရင်မလှောင်ပါနဲ့ ။ ငါဟာနင့်ကိုဘဲ ဂရုစိုက်ဘို့ တွေးနေမိလို့ကျန်တာတွေ ငါမသိခဲ့တာပါ။
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါ နွမ်းလျှပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါ ခွန်အားပါတဲ့လက်တစ်စုံနဲ့ ငါ့ကိုကူတွဲပေးပါ။နင့်ရဲ့ အကြင်နာနဲ့ ဖေးကူလာမယ့် လက်အစုံကို ငါမျှော်လင့်နေလို့ ပါ။
ငါနေမကောင်းလို့ဆေးသောက်ဘို့ ငြင်းတိုင်း နင်နားလည်ပေးပါ ။ နင့်ရဲ့ အကြင်နာနဲ့တိုက်လာမယ့် ဆေးတွေကို ငါတိတ်တိတ်လေး မျှော်လင့်နေလို့ ပါ။
နင်တစ်ယောက်ထဲ အားငယ်နေတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကိုခေါ်လိုက်ပါ ။ ငါရောက်ရာအရပ်ကနေ ပြေးလာမှာမို့ဘယ်တော့မှ နောက်မကျစေဘဲ နင့်အတွက် ဖြစ်စေရမှာပါ။
ငါနင့်ကို တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာကလဲ နင်ဟာငါ့အပြင် နောက်တစ်ယောက် ရှိသွားမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုထဲနဲ ငါကလေးဆန်မိတာပါ။
တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ အိုစာသွားတဲ့ငါ့ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းမနည်းပါနဲ့ နားလည်ပေးပါ။အားပေးပါ။အရင်တုန်းကလူ့ ဘ၀ တက်လမ်းအတွက်ငါလမ်းညွှန်ခဲ့သလိုအခုချိန်မှာငါ့ဘ၀နောက်ဆုံးအချိန်အတွက်အဖော်ပြုပေးပါ။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တွေနဲ့ အေးမြမှု တွေကိုငါပြုံးပြုံးလေးခံယူမှာပါ။အဲ့ဒီအပြုံးတွေထဲမှာမဆုံးတဲ့ငါ့မေတ္တာတွေတွေ့ ရမှာပါ။
အသက်ကြီးလာလို့ စကားပြောရာမှာ..ရှေ့နောက်မညီဘဲ အကြောင်းအရာတွေကို..ငါမေ့သွားတဲ့အခါ..အချိန်ပေးပြီး စဉ်းစား ခွင့်ပေးပါ။စကားအကြောင်းအရာတွေက ငါ့အတွက်အရေးမကြီးဘူး။ဘေးကနေငါပြောသမျှတွေကို နားထောင်ပေးရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
အချို့ စာသားတွေက ငါအိုသွားသောအခါထဲမှ တိုက်ရိုက်ယူထားပါတယ် .. မူရင်းအရသာ ပျက်သွားခဲ့ရင် ကျွန်မကဘဲ မူရင်းရေးသားသူကို တောင်းပန်ပါတယ်နော် ..
22:22 Posted by ကျောပိုးအိတ်
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒိနေ့ က သင်္ကြန်အတတ်နေ့ ။ ကျွန်မဖေဖေ တာဝန်ကျနေတဲ့ နယ်မြို့ လေးမှာတော့ သင်္ကြန်ကို အချိန်တော်တော်ကြာ ကျင်းပတယ်။ ဥပမာ သင်္ကြန်မကျခင်မှာ ကလေးသင်္ကြန်ဆိုပြီး ( ကလေးနည်းနည်း လူကြီးများများ) ၃ရက်ကြိုပါတယ်။ သင်္ကြန်ပြီးတော့လဲ တောသင်္ကြန်ဆိုပြီး နောက်ထပ် ၃ရက်ဆက်ပါတယ်။
ဒါတောင်ရေတွင်းထဲကရေကိုခပ်ပြီးပက်ရလို့ ။ မဟုတ်ရင်တော့
ဖေနဲ့ မေကတော့ တာဝန်အရ မဏ္ဍပ်ကို နေ့ တိုင်းသွားရတယ်။ ကျွန်မကတော့ အိမ်မှာနှပ်ရင်းအိမ်စောင့် နေခဲ့တယ်။
အတတ်နေ့ ရောက်တော့ တိုင်းမင်းကြီးကပြောတယ်။ ဘယ်လိုလဲ ရဲမှုး သမီးအငယ်ဆုံးလေးကို အိမ်ထဲမှာဘဲ ဖွက်ထားရလား။ ခေါ်ထုတ်လေတဲ့ ။ နောက်တော့ ဖေက ကျွန်မဆီ ဖုန်းခေါ်ပြီး မီးလေးရေ တိုင်းမင်းကြီးက လာရမယ်ပြောတယ်။ ခု အိမ်ကို ကားပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ မီးလေး မဏ္ဍပ်လိုက်ခဲ့ရမယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။
သြော် ကျွန်မအိမ်မှာ အေးဆေးနေတာ မကြည့်ရက်ဘူးထင်ပါ့။ နောက်တော့ လာကြိုတဲ့ ကားနဲ့ ကျွန်မလဲ ကိုးလို့ 
ကန့် လန် နဲ့ ပါလာတယ်။ အတတ်နေ့့ ဆိုတော့ မဏ္ဍပ်ပိတ်ပွဲလဲရှိနေသေး တော်တော်မိုးချုပ်မှပြီးမှာ။
တစ်မနက်လုံးရေစိုနေတာကြောင့် ညနေအေးမှာ ကျွန်မက အရမ်းချမ်းနေပြီ။ မေ့ ကို တိုးတိုးလေး အနားကပ်ပြီး မေပြန်လို့မရဘူးလား။ အရမ်းချမ်းနေပြီဆိုတော့ မေကပြန်လေ အိမ်ရောက်ရင်နွေးနွေးထွေးထွေးနေဆိုပြီးတော့ ကျွန်မကို အိမ်ပြန်ခိုင်းပါတယ်။
ကျွန်မလဲအိမ်ရောက်တော့ နောက်ဖေးမီးဖိုဆောင်ဘက်ဝင်ပြီး မီးသွေးယူ ရေနွေးတည်မယ်ပေါ့။ မီးသွေးအိတ် ပေါ်ကို လက်တင်လိုက်တော့ အေးစက်စက်ကြီး။ ဘာကြီးလဲမသိဘူးဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်ရတာ။ ကြောင်ချေးလား။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြီးလဲမသိဘူးဆိုပြီး အဲဒိ အေးစက်စက်ကြီးကို ညှစ်ကြည့်လိုက်တော့ အား………………… မြွေ မြွေ။ ကျွန်မကိုခေါင်းထောင်ကြည့်နေတယ်။ ဘာရမလဲ သိတယ်ဟုတ် နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ဘဲ ပြေးလိုက်တာ တန်းနေရော။
ကျွန်မတို့ နေတဲ့ အိမ်နဲ့လူပျိုဘားတိုက်က နည်းနည်းလေးဝေးတယ်။ လူပျိုဘားတိုက်ကိုသွားပြီး ဘယ်သူရှိလဲ ဘယ်သူရှိလဲ အိမ်ထဲမှာ မြွေမြွေဆိုတော့ ကိုလူပျိုတစ်သိုက် တုတ်ဆွဲ ဓါးဆွဲနဲ့ ပြေးလာကြပါရော။ နောက် သူတို့သတ်လိုက်ကြတယ်။
ညရောက်တော့ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ညနေက သတ်လိုက်တဲ့ မြွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ မြွေက ငါ့ကို ကျေနပ်ပါ့ မလား။ ငါ့ကြောင့် သူသေတာဆိုပြီး သရဲလာ ခြောက်ရင်သေပြီ လို့ တွေးမိပြီး ဖေနဲ့ မေကြားထဲမှာ အဲဒိညက ၀င်အိပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဂလောက်သတ္တိရှိတာ။
၂လလောက်ကြာတော့ ကျွန်မ ရေချိုးမယ်ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်လာတယ်။ ပြီးတော့ သီချင်းလေး တအေးအေး
နဲ့အိမ်နောက်ဖေး ခြံထဲမှာ သီးနေတဲ့ ငှက်ပျောခိုင်ကိုငေးပြီး တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ ဘုတ်တဲ့ ။ ပုခုံးပေါ် ဘာလဲမသိဘူး ပြုတ်ကျလာတယ်။
ကျွန်မက ဘာပြုတ်ကျတာလဲမသိဘူးဆိုပြီး ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့ မြွေဖြစ်နေရော။ ဆိုနေတဲ့ သီချင်းတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး။ အာခေါင်ခြစ်ပြီး အော်လိုက်တယ်။ မေကပြေးလာပြီး မကြောက်နဲ့ မကြောက်နဲ့ဆိုပြီး မေတ္တာပို့ တယ်။
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်ထဲက ခန္ဓာသုတ်ရွတ်တော့ အမောင်မြွေက လျှောကနဲ ထွက်သွားတယ်။ ဒီတော့မှ ကျွန်မလဲ စိတ်အေးရတော့တယ်။
နောက်တစ်ခါက ကျွန်မအိပ်ခါနီးပါ။ အိပ်ကာနီး စာဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်က ရှိနေတော့ စာဖတ်လိုက်တာ တော်တော်ညဉ့်နက်သွားတယ်။ မေကစောစောအိပ်နော်လို့ လာလာပြောတာ ၁၀ကြိမ်ထက်မနည်းတော့ဘူး။ မျက်လုံးညောင်းလာပြီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၂း၀၀ တောင် ထိုးတော့မယ်။ တစ်အိမ်လုံးအိပ်ကုန်ပြီ။ ကျွန်မလဲ ခြင်ထောင်ကို ထပြီးချရမှာ ပျင်းလေတော့ အိပ်ရင်းနဲ့ ဘဲ မိန်းကလေးပီသစွာ အောက်ကနေ ခြင်ထောင်အမိုးကို ကန်ချလိုက်တယ်း)။
ကြားလိုက်ရတာက ဘုတ်တဲ့။ လာပြန်ပြီ ဒီဘုတ်ဆိုတဲ့အသံ။ သေချာတယ် ဒါမြွေပြုတ်ကျတဲ့ အသံဘဲ။ မေတို့ကိုလဲ မနှိုးတော့ဘဲ မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး မေရွတ်သလို မေတ္တာပို့လိုက်တယ်။ ရွတ်နေတုန်း ကုတင်အောက် ခိုးကြည့်လိုက်တော့ အောင်မာ မြွေကလဲကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်။ ဘုရားဘုရား ငါမေတ္တာ ပို့တာမစွမ်းလို့ လား။ ခုထိမသွားသေးဘူး။ နောက်ဆုံးမေတ္တာပို့ တာကို မြွေကဘဲ နားမလည်တာလား ။ ဘာလားတော့ မသိတော့ဘူး။ မသွားဘူးရှင်။ ပေတေပြီးကျွန်မ ကုတင်အောက်မှာ ခွေနေတယ်။
အင်း …… ငါကောင်းကောင်းပြောနေတယ်နော် ။ ခေါင်းမာနေတယ်ဟုတ်လား ။ ဒီတော့လဲ ရတယ် ရတယ် နင်ကငါမေတ္တာပို့ တာ မရဘူးဟုတ်လား။ အေးတွေ့ မယ်။ နင့်ကိုငါချက်စားမယ်။ ပါးပါးလှီးမယ်။ တုတ်ထိုးလို အချဉ်ရေ စပ်စပ်နဲ့ စားပြစ်မယ်။ ဘာမှတ်လဲ။ ဘာညာဆိုပြီး ရွတ်လိုက်တယ်။
အဟား………………. ကျွန်မရွတ်လိုက်တာကို မြွေကနားလည်သွားလားမသိဘူး။ လျှောကနဲ့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
ကျွန်မလဲ ဒီတော့မှ စိတ်ချလက်ချအိပ်ရတော့တာ မနက် ၉း၀၀ နာရီထိုး မေလာနှိုးမှ နိုးတော့တယ်…….
06:43 Posted by ကျောပိုးအိတ်
ပင်လယ်လှိုင်းတွေက ကျွန်မရဲ့ခြေဖ၀ါးမှာ လာနားလိုက် ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေသလို သန့် ရှင်း လတ်ဆပ်သော လေနုအေးလေးတွေကလဲ ရှည်လျှားလှတဲ့ ကျွန်မရဲ့ဆံနွယ်တွေကို မြူးတူးတိုးခွေ့ လို့ ။
ကျွန်မရပ်နေတာကတော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တစ်ခုမှာပေါ့။ ဟိုး……………… အဆုံးအစ မရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီးနဲ့ပတ်ပတ်လည် ကာရံထားတဲ့ ပြာလွင်တဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေကို ငေးကောင်းကောင်းနဲ့ငေးနေမိပါတယ်။
ကျွန်မငေးနေတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ နောက်ကျောကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်မှ ကျွန်မသတိပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။မထင်မှတ်ဘဲ ၀င်တိုက်ခံလိုက်ရလို့အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ သဲသောင်ပြင်ပေါ် ကျွန်မဖင်ထိုင်ရက် ပြုတ်ကျသွားတယ်။
စိတ်ထဲမှာ အရမ်းလဲရှက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါသလဲ အရမ်းထွက်သွားတယ်။ ကြည့်စမ်း ဘယ်လောက်ရမ်းကားမှုလဲ။ အေးအေးဆေးဆေး ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနှောင့်ယှက်ဘဲ နေနေတာတောင် မလွတ်ဘူး။
“ရတယ်ရတယ် ။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။”
“ကျွန်တော်လဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကမ်းခြေကိုဘယ်သူအရင်ရောက်မလဲလို့ အပြေးပြိုင်ခဲ့တာ ။ မထင်မှတ်ဘဲ အရှိန်ထိန်းမရလို့ ”
ကျွန်မလဲထူပူနေတာနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့မိမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ ကမ်းခြေမှာ ပျော်ပွဲစားထွက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီလဲ ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိတော့ပါ။
နောက်မှသိရတာ သူကကျွန်မတို့ ပျော်ပွဲစား ထွက်လာတဲ့အုပ်စုထဲကဘဲတဲ့။ ဒီလောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ဝင် စားတဲ့ကျွန်မအဖြစ် ။
သူငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆက်ပေးအရ သူဟာဒီမြို့ လေးရဲ့ တင်းနစ် လက်ရွေးစင်တဲ့။ဖြူစင်တဲ့ အသားအရည် ၊ ဖော်ရွေတဲ့အပြုံးများ ၊ နူးညံ့တဲ့ မျက်ဝန်းများ ၊ ချောမောတဲ့ သူ့ ရုပ်သွင်တွေကြားမှာ ကျွန်မအသက်ရှုဘို့တောင် မေ့နေတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာ ကမ်းခြေနေ့ လေးကို ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ တွေမှာ ကျွန်မအလုပ်တစ်ခုပိုလာပါတယ်။ ညနေတိုင်း ဖေဖေ့ရုံးကိုသွားလည်ဘို့ ပါ။ သူတင်းနစ် ရိုက်တာ ဖေဖေရုံးခန်းနဲ့ ဆို မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်နေတယ်။ ညနေဆို ယောင်ပေပေနဲ့ကျွန်မ ရောက်ရောက်သွားတယ်။
သူကလဲ ကျွန်မလာတတ်တဲ့အချိန်တွေကို မျှော်မျှော်နေတတ်တယ်။ ကျွန်မလာပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကစားကွက်တွေ က ပိုပြီးအသက်ဝင်လာတယ်။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လဲ ကျွန်မကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ရက်ကိုလစား ၊ လကိုနှစ်စားနဲ့သူနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ခင်မင်မှုဟာ အရမ်းကိုခိုင်မြဲနေခဲ့တယ်။ သူ မပါဘဲ ကျွန်မ ဘယ်မှမသွားတတ်တော့သလို သူကလဲဘယ်သွားသွား ကျွန်မ မပါဘဲ မသွားတတ် မလာတတ်ဖြစ်နေတယ်။
မနက်စောစော အေးလွန်းလှတဲ့ ဆောင်းရနံ့ နဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းတစ်လျှောက် အတူတူ အားကစားလုပ်ခဲ့ တာ တွေ။ နေ့ လည်ဘက် ပူနွေးလှတဲ့နွေရာသီမှာ အုန်းရည်ဆိုင်တူတူ ထိုင်ခဲ့တာတွေ။မိုးရာသီ ကမ်းနားလမ်းက ပင်လယ်စာဆိုင်မှာ ကျောက်ပုဇွန်မီးကင်တူတူစားခဲ့တာတွေ။
ဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့ သာယာသော အမှတ်တရနေ့ လေးတွေပါ။
ကျည်းမြောင်းလှတဲ့ ဒီမြို့ လေးမှာ သူတို့ က မြို့ ရဲ့ မျက်နှာဖုံး စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှ နေရာယူထားသလို ကျွန်မကလဲ အရာရှိကြီးသမီးဖြစ်နေတာကြောင့် မြို့ ကလူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အများထင်သလို မဟုတ်ဘဲ သူနဲ့ ကျွန်မ ခုထိ ဖြူစင်နေဆဲပါ။
တစ်နေ့ သူကျွန်မဆီ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အရေးတကြီးတွေ့ ချင်တယ်။ ညနေကျရင် လေဆိပ်လမ်းက စောင့်နေပါတဲ့။ ကျွန်မကလဲ ပြောစရာရှိတာနဲ့ အတော်ဘဲ။ တွေ့ မယ်လေလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ညနေစောင်းတာနဲ့ကျွန်မလေဆိပ်လမ်းကို လာခဲ့တော့ သူကအရင်ရောက်နေတယ်လေ။
“အင်းပြောမယ်။ ဒါပေမယ့် သက်လွင်အရင်ပြော။”
လမင်းအရင်ပြော သက်လွင်အရင်ပြောနဲ့ တော်တော်နဲ့ လိုရင်းကိုမရောက်တော့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း အရာရာမှာ အလျှော့ပေးတတ်တဲ့ (အထူးသဖြင့် ကျွန်မပေါ်မှာ) သူကဘဲစတင်ပြီး အလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ဒီစကားလေးကိုသေချာနားထောင်ပေးပါ။ ကျွန်တော် လမင်းကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ချစ်ခဲ့တာခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ လမင်း ဒီမြို့ ကို စရောက်တဲ့နေ့ ကတည်းက ကျွန်တော် ခင်မင်ခွင့်ရချင်နေခဲ့တာ။ ပြီးတော့ လမင်းနဲ့ တွေ့ ရအောင် ကမ်းခြေ ပျော်ပွဲစားလေးကို ကျွန်တော်စီမံခဲ့တာ။ ”
“အဲဒိကမ်းခြေမှာလဲ လမင်းသတိထားမိလောက်အောင် ကျွန်တော် တမင်သက်သက် ၀င်တိုက်ခဲ့တာ။ လမင်းကို အရမ်းချစ်တယ်ဗျာလို့ဆိုတဲ့ ဒီစကားကိုပြောချင်ခဲ့တာ ကြာလှပြီ။ ဒါပေမယ့်မပြောရဲဘူး။ လမင်းနဲ့ခင်မင်ခွင့်လေး ပျောက်သွားမှာဆိုးလို့ ။ ခုတော့ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့လို့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောတာ။ လမင်းကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး တစ်ခုခု ပြန်ပြောပေးပါဗျာ။”
“ဒီစကားကို ဟိုးတုန်းကသာ ပြောခဲ့မယ်ဆို အရမ်းပျော်ဘို့ ကောင်းမှာဘဲနော်။ ဒါပေမယ့်ကိုသက်လွင် တကယ့်ကို နောက်ကျသွားပါပြီရှင်။ ကျွန်မတို့ မနက်ဖြန်ဆို အခြားနေရာကို ပြောင်းရတော့မယ်။ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကို။ ပြောင်းမိန့် ကျတာ ကြာပါပြီ။ ဖေဖေ အလုပ်များနေတာနဲ့ ချက်ခြင်းမပြောင်းဖြစ်တာ။ ခုတော့ ကျွန်မ ကိုသက်လွင်ကို လာနှုတ်ဆက်တာ။ ကျွန်မလေ ကျွန်မ………………”
နောက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီမှာ ကျွန်မတို့ မိသားစု အဲဒိချစ်စရာကောင်းတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါများလှတဲ့ ရေတံခွန်တွေပေါများ လှတဲ့ မြို့ လေး ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းထဲရောက်တော့လဲ ဖေဖေကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အရာရှိကြီးငယ်တွေ ကြားထဲမှာ ထိုင်နေရင်း ဒီမြို့ လေးရယ် အထူးသဖြင့် ကိုသက်လွင်ရယ် အဲဒါတွေကို စိတ်ထဲကနေ နှုတ်ဆက်နေမိတယ်။
လေယာဉ်ဆီသွားဘို့အပြင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ထင့်ကနဲဖြစ်သွားတာကြောင့် နောက်လှည့်ကြည့်မိတော့
အိုး………………..ဘုရားရေ ကိုသက်လွင် ။ကျွန်မက မလာတော့ဘူးထင်နေတာ။ ကျွန်မခြေစုံရပ်ပြီး သူ့ ကို ငေးကြည့်မိနေတယ်။ နောင်ဘယ်တော့များမှ ပြန်ဆုံတွေ့ မှာလဲ။ သူကလဲ ကျွန်မကို မျက်တောင် မခတ်တမ်း ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်မသူ့ မျက်ဝန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်ကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ စိုလက်နေပါတယ်။
ကျွန်မ ကိုသက်လွင်ကို ငေးနေတာ ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ မသိဘူး။ လေယာဉ်မယ်လေးမှ လာရောက်ခေါ်ယူတာကြောင့် ကျွန်မနောက်ဆုံးအကြိမ် ကြည့်ပြီးလက်ပြနှုတ်ဆက်ကာ လေယာဉ်ဆီကို ပြေးလာခဲ့မိတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်ရောက်တော့ ကျွန်မ ကိုသက်လွင်ရှိမယ့် နေရာကို မှန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ ကိုသက်လွင်က ကျွန်မကို မမြင်ရပေမယ့် မြင်ရသူ အလား ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ငြိမ်ပြီး ကြည့်နေတယ်။ မေကဘာမှမပြောဘဲ ကျွန်မခေါင်းကို လက်နဲ့ပုတ်ပေးတယ်။ ကျွန်မတို့ စီးမယ့်လေယာဉ်ကြီး စတင်ထွက်ခွာနေပေမယ့် ကိုသက်လွင်ကတော့ နေရာကနေ မရွှေ့ ဘဲ ကျွန်မတို့ လေယာဉ်ကြီးကို ကြည့်နေတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လေယာဉ်ကြီးက ဟိုးကောင်းကင်ဖြူဖြူကြီးဆီကို အရှိန်နဲ့ ထိုးတတ်သွားပြီ။ ကျွန်မချစ်တဲ့ဒီမြို့ လေးနဲ့ကိုသက်လွင်ကလဲ ဟိုးအဝေးမှာ မှုန်ပြပြ။
18:56 Posted by ကျောပိုးအိတ်
ဒီနေ့ က ကျွန်မရဲ့မွေးနေ့ ပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်က တော်တော်လေးကြီးလာပြီ ။ တည်ငြိမ်ပြီလား ဆိုတော့လဲ မတည်ငြိမ်သေးဘူး။ ခုချိန်ထိ ဆိုးကောင်းတုန်း ၊ ကလေးလုပ်ကောင်းတုန်း ။
စိတ်ပျိုကိုယ်နုတယ်ထင်ပါ့ရဲ့။ ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် အများကြီး ပိုငယ်နေသလိုဘဲ (အဟီးးးးးးးးးး … အဲဒါ ဘူမှ ပြောတာ အဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြောတာ)
ဒီနေ့ မနက်စောစောထတယ်။ ပုံမှန်ဆို ကျွန်မစောစောထလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ ဆိုတော့ ထူးထူခြားခြား စောစောထလိုက်တယ်။ ဘုရားကိုသေချာရှိခိုးပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဆုတွေကို အများကြီး တောင်းခဲ့မိ ပါတယ်။
ဒီနေ့ တော့ ကျွန်မခွင့်ယူထားလိုက်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်မမှာ မွေးရာပါ အယူသီးမှုတစ်ခုက အမြဲစိုးမိုးနေခဲ့တာ။ မွေးနေ့ မှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာများကို ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါတယ်။ စိတ်အနှောင့်ယှက် တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆို တစ်နှစ်လုံး ကံမကောင်းဘူးလို့ လဲ ကျွန်မ ယူဆတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မမွေးနေ့ အတွက် အလှူတစ်ခု လုပ်ဘို့ ရာ မွေးနေ့ မတိုင်ခင်ထဲက ကြိုတင် စီမံထားတယ်။ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လောက်နဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ် တိုင်ပင်ထားမိတယ်။
ကျွန်မရောက်ရှိနေတဲ့ မြို့ လေးမှာ ခွေးတွေ တော်တော်ပေါပါတယ်။ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ခွေးတွေ အများကြီး ဘဲ။ ဘယ်လောက်ထိတောင် ခွေးရူးသွပ်တဲ့ မြို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ ရုံးမှာဆို ရုံးက၀န်ထမ်း တစ်ချို့က ရုံးတတ်တာတောင် ခွေးလေးတွေ ခေါ်ခေါ်လာတတ်ကြတယ်။ ရုံးမှာက ခွေးရှောင်ရ လူရှောင်ရနဲ့ တစ်နေ့ 
တစ်နေ့ဘာတွေမှန်းလဲ မသိတော့ပါဘူး။
ဒီနေ့ မှာတော့ ချိန်းထားတဲ့ အတိုင်း အကောင်ထည်ဖော်ဘို့ ရာ ကျွန်မနဲ့သူငယ်ချင်း၂ယောက် တိရိစ္ဆာန် အစားအစာ ရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးမှာ အစားအစာ တွေကို ၀ယ်ပြီး သတ်မှတ်နေရာကို ရောက်လာကြတယ်။ ကျွန်မတို့ သွားခဲ့တဲ့ နေရာကတော့ ခွေးတွေ တော်တော်များများ ရှိတဲ့ နေရာလေးတစ်နေရာကိုပါ။
ပထမတော့ ခွေးတွေက သူစိမ်းဝင်လာတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဟောင်တာမှ ဆူညံနေရောဘဲ။နောက်တော့ သူတို့ကိုရန်မူတဲ့သူတွေမဟုတ်မှန်းသိတာကြောင့် အချို့ က ငြိမ်သွားကြတယ်။ နောက်တော့ အကုန်လုံးနီးပါး အမြီးလေးတွေ နန့် လာတယ်။
သူတို့ ကို ကျွန်မ ခွေးအစာကျွေးခဲ့တယ် ။ နွားနို့ တိုက်ခဲ့တယ်။ အိုးးးးးးးးးးးးးးးး စားလိုက်ကြတာ အလုအယက်။ ခွေးတွေက မစားဘူးတဲ့အစာဖြစ်နေလို့ လားမသိဘူး အားလုံးဗိုက်ကားနေတာတောင် ခုထပ်ချကျွေး ခုထပ်စားမယ့် ရုပ်တွေနဲ့ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်။
ကျွန်မ သူတို့ ကိုကြည့်ပြီး တော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူတို့ ဒီမနက်စာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စားခဲ့ရလို့ ပေါ့။ လူတွေကိုကျွေးရတာမှ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူး ဝေဖန်နေသေးတယ် ။ ခွေးလေးတွေကို အစာကျွေးရတာ ဘာမှ မဝေဖန်ဘူး။ ကောင်းမှကောင်း။
နောက်တော့ ကျွန်မ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းသွားကပ်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး ဆွမ်းပို့ချင်ပေမယ့် ထူးခြားလှတဲ့ ကျွန်မလက်ရာကြောင့် ဘုန်းဘုန်းတွေ ဆွမ်းစားပျက်မှာဆိုးတာကြောင့် အမတစ်ယောက်ကို သေချာချက်ခိုင်းလိုက်ပြီး အပေါ်ကနှမ်းလေးဖြူးကာ ကျွန်မ ဆွမ်းချိုင့်ပို့ ခဲ့တယ်။
အဲဒါပြီးမှ ကျွန်မ ရုံးကလူတွေကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့ ကို မုန့် ဟင်းခါးဆိုင်မှာ မွေးနေ့ အတွက် ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ မွေးနေ့ အတွက် ကျွန်မအိမ်ကိုဖုန်းဆက်ဦးမှဆိုပြီး ဖုန်းဆက်တော့ မကြီးလာကိုင်တယ်။ ဒီနေ့ တာမီးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးဆိုတော့ မကြီးက ဆုတွေ အများကြီးတောင်းပေးတယ်။ မေ့နဲ့ ပြောမယ်လေလို့ကျွန်မ ပူဆာလိုက်တော့ မကြီးက မေ့ကိုဖုန်းလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မက မေ့ဒီနေ့ လေဘဲရှိသေးတယ် မေ့က ဟတ်ပီဘတ်ဒေးမေ့သမီးတဲ့။ မေ့သမီးအတွက် မေ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးထားတယ်။ဘုရားမှာလဲ မေ့သမီးအတွက် ဆုတောင်းပေးထားတယ်။ ဘုရားဆွမ်း၊ပန်း၊ရေချမ်း၊ဆီမီးထွန်းပေးထားတယ်တဲ့။ အခုဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပြန်လာတာတဲ့။ မေ့သမီးမွေးနေ့ အတွက် မေ့ ဆွမ်းသွားပို့ တာတဲ့။ ပြီးတော့ မေ့သမီး မျက်စိမှိတ်ထား။မေ့ဆုတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ဆုတွေ အများကြီးတောင်းပေးတယ်။
မေ့ဆုတောင်းသံတွေကြားထဲမှာ ကျွန်မပျော်လွန်းလို့မျက်စိမှိတ်ထားရင်းတန်းလန်းနဲ့မျက်ရည်တွေ ကျလာခဲ့ တယ်။ ကျွန်မဒီကိုရောက်ကာစက ကျွန်မမွေးနေ့ ပွဲကို ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေး ထဲမှာ အဖော်မပါဘဲ ကျွန်မလုပ်ခဲ့ဘူးတာ။ အဲဒီတုန်းကမွေးနေ့ မှာ ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲဖြစ်တာကြောင့် အသည်း အသန် ငိုခဲ့ဘူးတာ ကျွန်မသွားသတိရလိုက်တယ်။အဲဒီတုန်းက ငိုခဲ့တာနဲ့ဒီနေ့ မျက်ရည်ကျတာ တော်တော် ကွာမှန်း ကျွန်မသိခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆို ကျွန်မဘေးနားမှာ ကျွန်မကိုချစ်တဲ့ ကျွန်မကို ခင်တဲ့ ကျွန်မရဲ့သံယောဇဉ်တွေ အများကြီး ကျွန်မဘေးမှာ ရစ်ပတ်လို့ နေတယ်။
နေ့ လည် ၃း၀၀နာရီမှာ ကျွန်မနောက်တစ်နေရာ သွားခဲ့တယ်။ ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ HIV ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကလေးတွေ ထားတဲ့ Saving House ကိုထပ်မံသွားခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ်အားလုံး အယောက် ၆၀လောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်။ အစတုန်းက ကျွန်မသိသလောက် ၁၀၀ ကျော်တယ်။ အခုတော့ အဲဒီကလေးတွေလဲ ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် အခုဆို ဂေဟာမှာ သိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။
ချစ်စရာ ကလေးလေးတွေအတွက် ကျွန်မ အ၀တ်အစားလေးတွေ၊ ပေါင်ဒါမှုန့် လေးတွေ၊ အားဆေးလေးတွေ၊ ကစားစရာအရုပ်လေးတွေ ၊ဘော်လုံးလေးတွေ ကျွန်မပေးခဲ့တယ်။ ပြန်ကာနီးကျတော့ ကျွန်မကို ဂေဟာက ဆရာမက အမဒီကလေးလေးမွေးစားမလားတဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးလေးက အသားဖြူဖြူလေး၊ မျက်လုံးဝိုင်ဝိုင်းလေးနဲ့အားလုံးခြုံကြည့်မယ်ဆို တော်တော်လေး ချစ်စရာကောင်းတာတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်ပါ။ အသက်က ၅လတဲ့။ အခုတော့ နို့ ဗူးတိုက်နေတယ်။ ကလေးလေးမေမေက မွေးပြီးထဲက ဆုံးသွားတယ်လို့ ပြောလာတယ်။ ကလေးလေးက ၅လသာပြောတယ် ရယ်ပြတတ်နေပြီ ။ ကျွန်မကိုလဲ ချစ်စရာ မျက်လုံးလေးနဲ့ ကြည့်ပြီး တစ်ချက်ရယ်ပြလိုက်တာ ကျွန်မဖြင့် ဘယ်လိုချစ်သွားမှန်း မသိတော့ပါဘူး။
အဲကလေးလေးကို မွေးစားဘို့ ကျွန်မကိုပေးနေတာကြောင့် တစ်ယောက်ထဲသမားဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ မတတ်သာတဲ့အဆုံးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ငြင်းခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးလေးကို ခဏတာချီလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကလေးလေးအတွက် ကျွန်မပြန်ပြီး ဆုတောင်းပေးလိုက်မိတယ်။ ကလေးရေ နောက်ဘ၀မှာ လူဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ မိစုံဖစုံနဲ့ရောဂါတွေ ကင်းဝေးပြီး လူ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကလေးလေးကို ရင်ခွင်ထဲပိုက်ပြီး ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ကလေးလေးကို ဂေဟာက ဆရာမဆီပြန်ပေးတော့ ကလေးက ကျွန်မလက်ကိုဆုတ်ကိုင်ထားလိုက်တာ မနည်းဖြည်ထုတ်ရတယ်။ ကျွန်မလဲ ဈေးကို အမြန်သွားပြီး ကလေးလေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ထပ်ဝယ်ပြီး ဂေဟာကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်လဲမကြာမကြာလာကြည့်ပါ့မယ်လို့ကလေးလေးကို ဂတိပေးခဲ့တယ်။
ကျွန်မပြောနေတာတွေ နားလည်တယ်ထင်ပါရဲ့ကလေးလေးက ပြုံးပြီး ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်။
နောက်တော့ အိမ်ပြန်လာပြီး ကွန်ပျူတာကို တန်းဖွင့်ပြီး ဘယ်သူတွေ မွေးနေ့ အတွက် Wish လုပ်ထားလဲ ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ တစ်မနက်လုံးလဲ ဖုန်းနဲ့ BD Wish တွေ အများကြီး လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ ညထဲက ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများဆီကနေ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် Wish တွေရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်သော
သူရဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးကို တိတ်တိတ်လေးမျှော်နေမိခဲ့တယ်။
ဒါလေးက ကျွန်မသွားသွားစတတ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဆုံး ဘွား(မဂျာမွန်း)ရဲ့ ဆိုတောင်းသံလေးပါ။
24th May မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်း များစွာတိုင်..
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း.ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း နှင့်တကွ.. စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါနိုင်သော..
မိဘအား စိတ်ချမ်းသာစေသော၊ သမီးကောင်းရတနာ ဖြစ်ပါစေ..
ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်းပြည့်စုံပါစေ...
ဒါလေးက မောင်လေးလင်းသူ(ဗိုက်ကလေး)ရဲ့ဆုတောင်းသံလေးပါ။
မွေးနေ့ကစပြီး အသစ်တဖန် ပြန်လည်ရှင်သန်လာတဲ့ ဗိုက်ရဲ့အမတစ်ယောက်
ဒါလေးက ကိုဖြိုးဇော်ရဲ့ ဆုတောင်းသံလေးပါ။
Happy birthday !ပါ။ မာမီရဲ့၊ ဘယ်နှစ်မြောက်မှန်းမသိတဲ့ မွေးနေ့မှသည်၊ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ၊ ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ဘ၀ကို၊ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ။
ဒါကတော့ ကြယ်စင်ငယ်(ဖြူတုတ်)လေးက ဆုတောင်းပေးထားတာ။
happy birthday မမ
ဒါကတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်လို ချစ်တဲ့ လေပြေက ဆုတောင်းပေးထားတာ။
happy birthdayမမဘ၀တလျှောက်လုံးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အကုန်လုံးကိုမမတယောက်တည်းပိုင်နိုင်ပါစေ.. နော်
ဒါကတော့ အမေအိတ်လို့ ချွဲတတ်တဲ့သား(၀င်းဖြိုးသိုက်)ဆီက ညထဲက မအိပ်ဘဲ တမင်လာစောင့်ပြီး Wish လုပ်ပေးသွားတာ။
happy birth day ပါ အမေ… ပျှော်ရွှင်ပါစေ အဲဒီအချိန်ကိုတမင်လာစောင်.နေတာ အမေ အံ့သြအောင် email ထားခဲ.မလို.
ဒါကတော့ အာနိုးလှမိုးချစ်သူ (ĢØĿÐΞŊ PÅÏŅĜ ) ရဲ့ ချစ်သူ မီးလေးဇာက ဆုတောင်းပေးထားတယ်။
ချစ်ချစ် နောက်၂နှစ်အတွင်း မြန်မြန်ပေါင်းထုတ်ရပါစေနော်
ဒါကတော့ သိပ်ချစ်စရာကောင်းပြီး စကားအရမ်းတတ်တဲ့ မီးမီးငယ်ရဲ့ ဆုတောင်းသံ။
ဒါကတော့ ညီမလေး သဲငယ်လေးဆီက မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးပါ။
ဒါကတော့ မော်စကို ကျောင်းတတ်နေတဲ့ ကဗျာတွေ အများကြီးရေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မိုးစက်အိမ်က ပို့ ထားတာ။
Happy Birthday ယင်ကောင် မွေးနေ့ မှာကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါလို့ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ
ဒါကတော့ မောင်လေးလွင်ဦးကို (ဂျေကို)ဆီက မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးပါ။
happy birthday နော် အစ်မ
ကျွန်တော်တို. အားလုံး အစ်မ ကို သတိရနေကြပါတယ်
ဒါကတော့ ချောကလက်မြို့ တော်ကနေ ပို့ လိုက်တဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးပါ။
ယနေ့မှ စ၍ နောင်နှစ်ပေါင် တစ်ရာတိုင် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၍ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်စုံပါစေလို့ ချောကလက်မြို့တော်မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.
မွေးနေ့ မှာပျော်ရွှင်စေကြောင်း chocolate မြို့ တော်မှ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်မကို မေ့လို့ ခေါ်တတ်တဲ့ သားအောင်လေး(အလန်ကွာတားမိန်း)ရဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းသံ။
သားမေရဲ့. မွေးနေ့မှသည် မေသည် တသက်လုံး ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပြီး
ယခင့်ယခင်ကထက် မိမိအကျိုး၊ အများအကျိုးကို ဆထက်မက သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သော
တော်ဝင် မိန်းမမြတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ သားဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်မေ...
မွေးနေ့ ပုံတွေပါ တင်လိုက်ရင် စာမျက်နှာတော်တော် များသွားနိုင်လို့ပုံတွေ မထည့်တော့ဘဲ ဒီတိုင်းဘဲ စာသားလေးတွေ ကူးယူပြောလိုက်တာ။
11:50 Posted by ကျောပိုးအိတ်
(ကြက်သားရယ် မှိုရယ် နောက်ဘာတွေလဲ မသိဘူး ပါတော့ပါတယ်)
ဆေးဘဲဥရယ် ၊ ငါးဖယ်လုံးရယ်၊မြေပဲဆံရယ်၊က်အူချောင်းအချဉ်ရယ်၊ ၀က်သားပြားရယ်။
တရုတ်ဆေးဟင်းချို (ဆေးမြစ်တွေ ဆေးလုံးတွေ ပါတယ်)
နည်းနည်းခါးတယ်။အဲဒါကြောင့် ကြက်သားနဲ့ ပေါင်းထားတာ
ဒါကျွန်မစားတဲ့ ပန်းကန် (မွေးနေ့ ရှင်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး စားထားတာ)
အချိုပွဲ (ကောက်ညှင်းမုန့် )
ဒီနေ့ မနက် (အခုလေးတင်) မွေးနေ့ ရှင်မပါဘဲ သူ့ ကိုယ်စား မွေးနေ့ ပါတီလုပ်ပြီး စားခဲ့တယ်။
ပိုက်ဆံပြန်ပေးနော်။ အဟတ် ။ နင်ကတော့ တင်ထားတဲ့ပုံဘဲ စားနော်။ ငါကတော့ တကယ်တီးခဲ့တာ။